फेसबुक च्याटमा धेरैले सोध्ने प्रश्न : यूट्युबको भिडियो सजिलैसँग डानलोड कसरी गर्नेे ? सफ्टवेयर बिनै डाउनलोड गर्ने सजिलो तरिका छ ? हेडलाइनमा एकै क्लिक भनिएतापनि जम्माजम्मी दुई क्लिकमा यूट्युवको भिडियो डाउनलोड गर्न सकिन्छ । यो कुनै नयाँ टिप्स हैन तरपनि
फेसबुकमा अब डीस लाइक बटन पनि आउने
एजेन्सी । तपाइँ दिनहु फेसबुकमा फोटो र स्ताट्स हाली धेरै भन्दा धेरै लाइक पाइरहनु भएको छ भने अब तपाइलाई झड्का लाग्ने भएको छ । फेसबुकमा नकारात्मक सामग्री पोस्ट गर्नेलाई पनि मार्क जुकरबर्गले थप्पड हान्ने भएका छन् । किनकि सामाजिक संजाल फेसबुकमा अब dislike बटन पनि
फेसबुकमा प्रोफाइल पिक्चरको रुपमा भिडियो राख्न मिल्ने तरिका
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले नयाँ विशेषता ल्याएको छ । फेसबुक प्रयोगकर्ताले अब आफ्नो प्रोफाइल पिक्चरको रुपमा भिडियो पनि राख्न सक्ने छन् । फेसबुकले सात सेकेन्डसम्मको भिडियोलाई प्रोफाइल पिक्चरको रुपमा राख्न मिल्ने सेवा सुरु गरेको हो । प्रोफाइल भिडियो सेवा सुरुमा